Makosi - Bilingual Dzidzo Institute
musha Chirungu kune Vapoteri, maAsylees, SIV, uye Vakakuvadzwa MukutengeswaCourses
Chirungu Mutauro Wedzidzo Makosi
Makirasi eESL anotarisa kupukunyuka kwemitauro yemitauro. Makirasi edu anodzidzisa hunyanzvi hwemutauro wekutaura, kuteerera, kuverenga uye kunyora. Tine makirasi eChirungu ezvikamu zvese kubva ku pre-kutanga kutanga.
Iyi kosi yakagadzirirwa vadzidzi vane zvishoma kana vasina ruzivo rwechirungu. Vadzidzi vachadzidza mavara, kutaridzika kwenhamba, mazwi ekuona, uye magiramu.
Kune vadzidzi vane zvisina kujairika marongero kana kuti vanogara kure, BEI ine online yekuzvigadzira piredhi makirasi evadzidzi kuti vadzidze Chirungu chero uye chero nguva. Makirasi anopiwa kuburikidza nekudyidzana kwedu neBurlington Chirungu.
Chirungu makirasi anodzidziswa neHybrid nzira inopa kuraira mune zvese zviri zviviri online uye kumeso-kune-makirasi makirasi. Iyi kosi yakanakira kune vadzidzi vanofarira vese-vanodzidzisa-poga kuraira uye kudzidzira nemurayiridzi nevamwe vavanodzidza navo.
Diki Boka Kudzidzisa
Iyi kosi yakanakira mapoka madiki ane akafanana mitauro yekudzidza mitauro uye vanofanirwa kushanda pane chaiwo mitauro zvibodzwa.
BEI inopa murayiridzo wakasarudzika wemudzidzi ane mashoma kugona izvo zvingaite kuti zviome kutora chikamu mukirasi yeboka. Kugona kushoma kunogona kusanganisira, asi hakuganhurwe kune yakaderera maonero, kushomoka kwekunzwa, uye nyaya dzekufamba.
Chirungu Kune Chaizvo Zvinangwa Zvidzidzo
Hupenyu Hupenyu Chirungu
Aya makosi anounza achangosvika mupoteri mumabasa eruzhinji rweAmerica. Vadzidzi vanozoziva mitezo dzakasiyana dzenharaunda yenharaunda uye chiRungu chinodikanwa kuti chibudirire. Misoro yenyaya dzinozivikanwa inosanganisira Financial Literacy, Hutano hwekuverenga, uye Kunzwisisa iyo US Education system.
Aya makosi anopa hunyanzvi hwechirungu kune chaiwo maindasitiri ebasa. Vadzidzi vari mumakosi aya vanogona kuve neruzivo rwekare mundima idzodzo kana vanogona kufarira kupinda mumunda webasa. Misoro yenyanzvi yakakurumbira inosanganisira Medical Chirungu, Chirungu cheRuzivo Technology, uye Chirungu kune Administrative Professionals.
Iyi kosi yakagadzirirwa vashandirwi vane huwandu hwakakosha hwevapoteri vanoshanda. Makirasi anowanzove kubasa uye kusanganisa kupona kwechirungu kugona kwehunyanzvi neine indasitiri inoenderana neshoko mazwi nemitsara.
Zviri mukati -Special Chirungu
Izvo zvinodikanwa chaizvo yenharaunda yevapoteri yeHouston inogona kusarudza kuti makirasi eChirungu nekuda kwezvinangwa zvakadikanwa anodiwa kukurudzira kuvimba uye kuzvigutsa munzvimbo dzakadai sekukurukurirana, kunyora, nezvimwe.